BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 12 / Activity 1
Yooyyaa! Qophii jechoota Afaan Inglizii keessatti of ibsuuf si fayyadan ‘English Expressions’ akkasumas haaraa ta’an akka bartuu si gargaarrutti baga nagana dhufte. Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu 'Cold feet' jedhu ilaalla. Maal jechuudha jette yaadda? Hinbarree? Tole itti fufii caqasi. Haasawa Robiifi Lii gidduutti taasifame caqasi. Otuma caqastuu caqastutti, Roob maaliif akka aaree hubachuu yaali. Akkasumas wanta isa aarse ilaalchisee Rob maal gochuuf akka deemu caqasi hubadhu.
Rob aare jira. Sababiin isaas hojii hojjetutti beekumtii 'recognition' akka hinkenaminiif waan itti dhagahamuufi. Gara hogganaa 'boss' kiyyaa deeme kaffaltiin akka naaf dabalamu 'pay rise' gaafadha jedhe. Dhuguma kana gochuussaa baruuf caqasi.
Rob waa’ee mindaa (kaffaltii) dabalataa gaafachuuf gara hogganaa isaa deemuuf ture. Haa ta’u malee muranno dhabuun 'Cold feet' itti dhagahame. Wayita 'Cold feet' jennu, kun jechuun waan hojjeechuuf karoorfanne tokko gochuuf ofitti amanta yookaan muranno hinqabnu jechuudha. Waan tokko hojjechuuf jenne wayita Cold feet namatti dhagahamuu jechuun miirawwan soda fi dhiphuu waliinis kanwalqabatuudha. Keessatu wayita namoonni waan akka cidaa qabaachuuf yookaan hojii jijjiraachuuf jedhan miila qabanaawaa qabaachuu danda’u. Miilla qabbanaawaan yeroo baay’ee jecha 'get' jedhuu waliin ta’uun 'get cold feet' kan jedhu fida. Akkasumas jecha 'have' waliinis ta’uun 'have cold feet' fida. Gaaleen kun akkamitti hojjiirra akka oolu fakkeenyawwan muraasa haa caqasnu.
Tole, Rob waajjira hooggaa isaa deemara otoo ta’e maal akka ta’u danda’u mee haatilmaamnu. Akkuma Liin jedhe, 'cold feet' itti dhagahamuunsaa 'hot head' qabaachuurraa isa oolche. 'Hot head' jechoota lama irra kan ijaarameedha; ‘ho’t’ fi ‘head’. Hiikaan gaalee kanaas aariidha. Wayita namni tokko aaru. Rob tari aareera ta’a, haa ta’u maleemoo gara hoogganaa isaa deemee rakko qabu itti himuuf murannoo hinqabu ture. Jechoiota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan 'English Expressions' dabalataaf yeroo ittaanutti walitti deebina.
Jechi ‘cold’ jedhu gaalee kana guutuu gochuuf jecha kana waliin deemuu qaba.
Gaaleen kun waa’ee namna miilli isaa qabbanaawee kan himu utuu hinta’in waa’ee namni tokko hojii wahii hojjachuuf jabinaafi ofitti amanummaa dhabuusaati.
Robiifii Liin gochama kamiin ‘cold feet’ fulduratti fayyadaman?